သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိများ ၄၉ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတ္တဆန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများထက်သာသည်ဟုထင်သောလူများနှင့်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကျိုးစီးပွားများသည်အခြားသူများ၏ထင်မြင်ချက်များထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ အတ္တဆန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကစကြာ ၀ themာသည်သူတို့ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလှည့်ပတ်သွားသည်၊ သူတို့ကအခြားသူများထက်သာသည်ဟုထင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အတ္တဆန်သောအတွေးအခေါ်ကိုဖော်ပြသောစာပိုဒ်တိုများကိုသင်ရှာဖွေနေသည်၊ သို့မဟုတ်လျှင်အနည်းဆုံးအတ္တဆန်သောသူတစ် ဦး ၏စိတ်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိလိုလျှင်စာဖတ်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်အတ္တဆန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤစကားစုများသည်သင်တို့၌များသောအားဖြင့်ရှိသောအတွေးများဖြစ်သောကြောင့်ဤစကားစုများသည်သင်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်အတ္တဆန်လွန်းသူတစ် ဦး ဦး ကိုသင်သိလျှင်သူတို့၏စိတ်ကိုပိုမိုနားလည်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လည်း egocentricity ရဲ့နားလည်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အခြားစကားစုတွေကိုလည်းထည့်သွင်းသွားမှာပါ။
လူ ၂ မျိုးသာရှိသည်။ ချစ်သူများ၊ ငါ့ကိုမသိသောသူများဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏သာလွန်ရှုပ်ထွေးသောဥစ္စာထက်သာ။ ကောင်း၏ ...
လူတစ်ယောက်က "ငါ" ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတစ်မိနစ်တောင်မပြည့်ခင် ၅ ကြိမ်ထက်ပိုပြီးပြောတဲ့အခါသူတို့ဟာအတ္တကြီးတဲ့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိတယ်။
သင်တစ် ဦး အတ္တဗဟိုပြုကိုမြင်သောအခါ, ခြင်္သေ့သည်လှောင်အိမ်ထဲကထွက်လာသည်ကိုမြင်ရသကဲ့သို့ပြေးပါ။
ရင့်ကျက်သောလူအားလုံးသည်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုစီရှိကြသည်။ ရင့်ကျက်သောလူတစ် ဦး သည်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗဟိုပြု၍ မရပါ။
တစ်ခါတစ်ရံလူတစ် ဦး သည်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသည့်အတွက်သူဖြစ်ပေါ်စေသောနာကျင်မှုကသူ့အားဆန့်ကျင်သောအကျိုးဆက်များမရှိဟုထင်မြင်သည်။
မျက်မမြင်တစ် ဦး နှင့်ကြင်နာတတ်သူသည်သူတစ်ပါးကိုဂရုမစိုက်သည့်မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသူတစ် ဦး ထက် ပို၍ အမြင်အာရုံရှိသည်။
Egocentric သည်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ အတ္တဆန်သောသူသည်အခြားသူများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အကျိုးအမြတ်ကိုရနိုင်သည်။
ငါကြမ်းတမ်းသောအရာကိုတစ် ဦး အတ္တများကြိုက်တတ်တဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားမှုရှိသူအားလုံးကနာကျင်သော်လည်းစိတ်ဓာတ်မကျသူတစ် ဦး သည်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအားနည်းသူကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်သည်။
ငါဟာအတ္တဆန်ဆန်နေထိုင်သူတစ်ယောက်ထက်ကမ္ဘာပေါ်မှာအညစ်ညမ်းဆုံးလူနဲ့အတူနေချင်တယ်။ ပထမတစ်ခုကညစ်ပတ်ပေမဲ့သူမစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်၊ ​​ဒုတိယကတော့သန့်ရှင်းတယ်၊
သင်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသူတစ် ဦး နှင့်စကားပြောသောအခါစိတ်ပညာရှင်တစ် ဦး ကဲ့သို့ပြုမူရန်အသင့်ရှိပါ။ မင်းရဲ့ဘဝ ၉၀% ကမင်းရဲ့ဘဝအကြောင်း၊ ကျန် ၁၀% ကသူ့အကြောင်းကိုပြောလိမ့်မယ်။
၎င်းသည်သင်၏ဘ ၀ ၏အရေးအကြီးဆုံးနေ့ဖြစ်သော်လည်းအတ္တဆန်သောအရာတစ်ခုနှင့်အတူထိုအရာသည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုနေ့တွင်သင်မနက်စာအတွက်ရှိသည်မှာစကားဝိုင်း၏အဓိကခေါင်းစဉ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Egocentricity တိုတောင်းသောဆားကစ်အချင်းချင်းဆက်သွယ်ရေး, စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့စွမ်းရည်ကိုအားနည်းခြင်းနှင့်အသိဥာဏ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုကန့်သတ်။
သူတို့ကသင့်ကိုမည်မျှလေးစားသည်ဟုမည်မျှပင်ပြောဆိုပါစေ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုသူတစ် ဦး သည်သင်ပြောသောစကားကိုမည်သည့်အခါမျှအမှန်တကယ်နားထောင်မည်မဟုတ်ပါ။
egocentric ဖြစ်ခြင်းသည်ယုတ်ညံ့ရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှု၏အလွန်များပြားသောအကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်္ဂလာဆောင်တွင် egocentric သည်သတို့သမီးဖြစ်ရမည်! အသုဘတွင်, အတ္တဗဟိုသေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ရမယ်! အရာအားလုံးသူ့ကိုလှည့်ပတ်လည်ပတ်။
လူတစ် ဦး ၏အတ္တဆန်သောခံစားမှုမှ ပိုမို၍ ခံစားနေရသောသူတစ်ယောက်သည်မှန်၌သူထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုကိုကြည့်သောအခါသူနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ကျိုးရှာသူများအတွက်အတ္တကအဆိုးရွားဆုံးသောလုပ်ရပ်မှာ "ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး" ဟုပြောရန်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုပယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » သင့်ကိုစဉ်းစားစေမည့်အတ္ထုပ္ပတ္တိစကားစု ၄၉
လေ့လာရန်လှုံ့ဆော်ခံရဖို့ဘယ်လို: အဲဒီမှာရောက်ဖို့နည်းလမ်း 11